नायिका बर्षा राउतको लाजमर्दो अभिव्यक्ति – भारतले मिचेको भुमी नेपालले मेरै हो भन्न मिल्दैन (भिडियोसहित) — Sanchar Kendra
कामठमाडाैं । भारतीय अतिक्रमणबिरुद्ध सिङ्गो देश एक भएका बेला नेपाली नायिका बर्षा राउतले भने निक्कै बिबादित अभिव्यक्ति दिएकी छिन । उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा भारतसंग नेपालले टक्कर लिदाँ आफुलाई अप्ठायारो भएको बताएकी छिन् । एक भिडियो जारी गर्दै यस्तो विवादीत प्रतिक्रया दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ ।
उनले नेपाल भारतका पत्रकारले भूमीको विषयलाई लिएर पचारप्रशार गर्दा समस्या भएको बताएकी छिन् । उनले भूमिको समस्या दुइ देशको राजनीतिको विषय भएकाले नेपाल र भारत सरकारले समाधान गर्नु पर्ने सुझाव दिएकी छन् । वर्षाले दुइ देशका पत्रकारहरुले भूमीको विषयलाइ लिएर गरिएको बहसले उनलाइ समस्या भएको बताएकी छन्।
यसअघि भारतमा आफ्नो सिङ्गो कलाकारिता जीवन बिताएकी मनिषा कोइरालले नेपालकाे समर्थनमा बोलेकी थिइन । नेपालकाे समर्थनमा बाेलेपछि भारतमा उनकाे चाैतर्फी बिराेध भयाे भने भारतीय मिडियाले उनलाई भारतकाे नुन खाएर चीनकाे समर्थन गर्ने भन्दै तुच्छ गाली पनि दिन भ्याए । तर आम नेपालीहरुले भने उनलाई साथ् दिएका छन् ।
उता नायिका केकी अधिकारीले आफ्नो फेसबुब मार्फत छिमेकीलाई आफ्नो भूमिबाट स–सम्मानका साथ फिर्ता पठाउन तयार रहेको धारणा राखेकी छिन् । उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो भारतसँगको निर्भरता र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ । तर जब प्रश्न राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वार्वभौमसम्त्ता माथी उठछ, हाम्रो स्वाभिमान संसार कै अग्लो सगरमाथा जति नै उच्च हुन्छ ।
नायिका केकी अधिकारीले थप लेख्छिन्, ‘हामीले आज हाम्रो भूमिकै लागि आवाज उठाइरहँदा यो नभुलौँ कि हामी नेपाली विश्वभर आफ्नो विरता, सभ्यता र सरलताको लागी कहलिएका छौँ । कुनै पनि धारणा र विचार राख्नु अघि हामी राष्ट्रियताको नाउँमा अरु राष्ट्रको खिल्ली उडाउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुगाउने व्यबहारले परिचित छैनौँ भन्ने नभुलौ । हामी बदलामा हैन बलिदानमा बिश्वास राख्छौं ।’
उनले अगाडि लेखेकी छिन – हामी बदलामा हैन बलिदानमा बिश्वास राख्छौं । हामी वैमनस्यतामा हैन बिचारमा बिश्वास राख्छौँ। हामी छिमेकीको जमीन हडप्नमा हैन , छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा ससम्मान चिया नास्ता खुवाएर बिदा गर्नमा बिश्वास राख्छौं । भूगोलले सानो भएपनी नेपालीको मन ठूला ठूला देश भन्दा पनि बिशाल छ। नेपाली हो नि!!”
हामी बदलामा हैन बलिदानमा बिश्वास राख्छौं । हामी वैमनस्यतामा हैन बिचारमा बिश्वास राख्छौँ। हामी छिमेकीको जमीन हडप्नमा हैन , छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा ससम्मान चिया नास्ता खुवाएर बिदा गर्नमा बिश्वास राख्छौं । भूगोलले सानो भएपनी नेपालीको मन ठूला ठूला देश भन्दा पनि बिशाल छ। नेपाली हो नि!!”
यसैबिच, नायक निखिल उप्रेतीले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका छन् । उनले, अब कसैसँग पनि झुक्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । निखिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहसिक कदम चालेको भन्दै यो समयमा सबै नेपाली एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।